Uzofakaza ngonyaka ozayo uQedani Mahlangu | News24
Uzofakaza ngonyaka ozayo uQedani Mahlangu
Johannesburg – Abameli balowo owayenguNgqongqoshe wezeMpilo eGauteng, uQedani Mahlangu, batshele ikhomishini ephenya ngesigameko sase-Life Esidimeni ukuthi uzokwazi ukwethula ubufakazi bakhe ngoJanuwari 2018.
Uphenyo ngokwenzeka luqale sekwedlule ihora ngoLwesihlanu ngenxa yokuthi abameli bakhe bebenomhlangano nonguSihlalo wekhomishini uDikgang Moseneke, kanye nabamele iSection27, iLegal Aid, iSolidarity, abahola uphenyo kanye naboMbuso.
Abameli baMahlangu batshele ikhomishini ukuthi uMahlangu uzoze athole isikhathi sokwethula ubufakazi ngoJanuwari uma esephothule izifundo azenzayo e-University of Bedfordshire e-United Kingdom.
OLUNYE UDABA: Iphoyisa libelethise owesifazane ku-N2
Ngasekuqaleni kwesonto, inyuvesi ithe imumisile uMahlangu ezifundweni zakhe ngenxa yezinsolo ezibucayi anukwa ngazo.
Kodwa abameli bakhe ngoLwesihlanu bathe bahlela ukusiphonsela izinselelo isinqumo sokumiswa kwakhe ngoba kasenzi mqondo.
Abameli baMahlangu bathe uzoze akwazi ukwethula ubufakazi phakathi komhlaka-22 nomhlaka-26 Januwari 2018.